Shakhsiyaad mucaarad ah oo magac leh ayaa dowlada Itoobiya ku soo oogtay dacwad ah… – Hagaag.com
Shakhsiyaad mucaarad ah oo magac leh ayaa dowlada Itoobiya ku soo oogtay dacwad ah…
Shakhsiyaad magac leh oo mucaarad ah ayaa ka mid ah 24 qof oo ay Itoobiya ku soo oogtay dacwad ah argagixisanimo.
Eedahaas ayaa waxay la xiriiraan qalalaase isir ku salaysnaa oo dhawaan ka dhacay dalkaas ka dib markii la dilay heesaa caan ah oo Oromo ahaa, Hachalu Hundessa, waxaana ku dhintay rabshadahaas dhacay dabayaaqadii bishii June 150 qof.
Dadka dhaliila Ra’isal Wasaare Abiy Ahmed ayaa ku eedeeyey in uu xirxirayo dadka mucaarida xukuumaddiisa.
Waxa la xiray bishii July markii ay ciidamada nabadgelyadu qabqabashada bilaabeen. Qareenkiiisa ayaase Sabtidii ganafka ku dhuftay dacwaddaa lagu soo oogay waxaanu ku tilmaamay mid aan sal lahayn.
Dad badan oo dhaliila, oo qaarkood aanay dalkaba joogin, ayaa sidoo kale magacyadooda lagu daray dadka eedaysanayaasha ah.
Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku dhaleeceeyey dowladda in ay todobaadyo ku qaadatay in ay dadkaa dacwado ku soo oogaan maxkamad lagu soo taago.